トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ iqabane Soul kwaye
Ndicinga kuye kwafunyaniswa ukuba "lo mntu eze kamnandi Ukuba," "engento kwaye oku kungekhona umntu"?
hlobo, abantu ubukho Yorisoeru kutheni snugly, ungenza iqabane umphefumlo. A iqabane umphefumlo, koko ekhona ezahlukeneyo nolwalamano ezifana abathandi kunye nabahlobo.
We ezizalelwa ukuba afe, nathi phindwa amaxesha amaninzi umjikelo ukuba nayo azalwe. Ngaloo mjikelo, ebizwa kwakhona umntu nzulu kunye ngohlangothi kwanaxa abantu abasebenzisana neqabane umphefumlo amaxesha amaninzi. Kulo mjikelo, nto leyo ithathwa ukuba ukudibana ngokwemvelo ixesha kufuneka idibane, siye ixesha ngalinye baye bakha ubuhlobo. Elinye iqabane Umphefumlo, idityaniswe umphefumlo ngaphaya ubuntu
like, kufuneka uzive njalo into eyahlukileyo kwabanye abantu. In
luphawu komphefumlo iqabane
, bekuya kuba yintoni oko? A umsebenzi osemqoka iqabane komphefumlo.
? amaxesha amaninzi
odlulileyo ebomini ukuba sizakhele ukuba kunye lifumana intlanganiso, kuba ngabantu abaye bachitha ixesha enye, naxa niyathandana wadibana ngoku, umele uchithe ngesizathu esithile ezolile. Ngenxa enokuba kubhaliwe eziqhagamshelene baqiniseka kakhulu omnye komnye, ndikhumbula imvo inqondo elithozamisayo.
? Kanye phambi njengokuba
iqabane umphefumlo kunye intlanganiso yokuqala ukuba ndiziva ukuba kukho ethile, uyalikhumbula va nostalgic ngathi siye sadibana kwindawo ethile. Kwaye, kubonakala ufuna wokwazana ngokwendalo. Oku, ithi ukuba ubungqina kwenye nenye kwinqanaba umphefumlo nenye nomtsalane.
? kwi ingeniso nelahleko Ndahamba uthandana nabantu Tsukiaeru
yaye somhlaba, ngaba oko kangako ukuba basebenzisane ngaphandle kokujonga kwilahleko kunye inzuzo. Kodwa ukuba iqabane umphefumlo, nokuba ngaphandle kuquka nayiphi ukubala, ezifana ingeniso kunye nelahleko, sizalwa imvakalelo ukuba ufuna ukwenza into ukuze elinye iqela.
? iqabane yindlela wabona
ngokuqhelekileyo kukuthi, kwaye kufuneka babe naye amazwi ukuba ucinga elinye iqela Kudla hayi wamthethisa ukuba, oku kuthatha ixesha elininzi lokuba abe kunokubonwa yobuso kunye nesimo sengqondo. Noko ke, nangona kungekho magama kunye nezinye iinkcukacha libe iqabane umphefumlo, unako Ukugweba ngandlel iimvakalelo.
ngenxa yokuba, izahlulo eziqhelekileyo basoloko
le ndawo efanayo kungekhona inxalenye kuphela kubuntu enjalo kunye nokuziphatha. Umzekelo, idolophu kunye neendawo ozithandayo, ukuya kuloo nto kunye nosapho ezakheke, yenye yezona zinto komlingane umphefumlo ukuba kukho iindawo ezininzi eziqhelekileyo.
Kukho ukudibana iqabane umphefumlo?
yinto enye kwenye bathanda indalo kunye neqabane umphefumlo, kodwa kukho imfuneko ukuhlangabezana. Ngenxa yokuba xa udibana iqabane umphefumlo, nina nithi ukuba kube sisiganeko yonke yenguquko yobomi bam. Xa uzama Susumo kwinyathelo elilandelayo, ezifana inkqubo lokukhula, yinto oluza nazo xa uzama ebomini Fumo.
Ngoko ke, ukuze ukuhlangabezana iqabane umphefumlo, kuqala ibe phambili ebomini bakhe ezintle, kunye nokudibana nabantu Masizame ukuba sihlandlo ngasinye ukuba nditsale.
, Kuyinto into eyakhayo nazo xa uzama ebomini Fumo.